Oppo တင်ပေးသူ - Oppo F3 Plus အားများအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » Oppo တင်ပေးသူ - Oppo F3 Plus အားများအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ
Oppo တင်ပေးသူ - Oppo F3 Plus အား APK ကိုများအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ
Oppo တင်ပေးသူ Android ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုဖွင့်တင် Oppo ကင်မရာဖုန်း f3s SelfieExpert အဘို့အတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပေးသူနှင့်အတူ, သငျသညျဆောင်ပုဒ် Oppo မှစတိုင်သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Oppo ဆောင်ပုဒ်နှင့်အ icontrol ဆောင်ကြဉ်း Oppo launhcer နှင့်အတူစိတ်ကူးစိတ်သန်းကျော်လွန်အရာအားလုံးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် - သင့် android ဖုန်းကိုထိန်းချုပ်စင်တာ os ဆောင်ပုဒ်။ ဒေါင်းလုပ်ကြိုးစားပါနှင့် Oppo ဖုန်း Launcher ၏များစွာသောပျော်စရာအင်္ဂါရပ်များ join !!!! က Android launcher apps များရှည်ဟာ android အတွေ့အကြုံ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရပြီ။ သင်သည်သင်၏နေအိမ်ဖန်သားပြင်ကိုသင် Oppo launcher နှင့်ဆောင်ပုဒ် Oppo တွေ့ကြုံခံစားချင် Oppo f1s ဖုန်းကိုတူအောင်သို့မဟုတ်ပြုမူခြင်းနှင့်သင်လမ်းမကြိုက်ဘူးလျှင်သင်, ဇာတိ launcher သင့်ရဲ့ဖုန်းကို အသုံးပြု. ရသည်။ သငျသညျတခုဖွင့်တင် Oppo f1s ဖုန်းကိုရှာကြ၏။ ကျွန်တော်တို့၏ Oppo တင်ပေးသူ app ကိုသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရိုးကအားလုံးပြောင်းလဲပစ်ရန် Oppo များအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
Oppo F3 Plus အားဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို AOSP စတိုင်သုံးပြီးထားတဲ့အန်းဒရွိုက်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး OPPO launcher စိတ်ကြိုက် App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုကိုကြည့်ဖို့သင့်စံက Android Home Screen ကိုစိတ်ကြိုက်သို့သော်သင့်ကိရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်ကူညီပေးသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ OPPO launcher app ကို အသုံးပြု. ... သင့်ရဲ့နောက်ခံနောက်ခံများ, icon များ, အပြင်အဆင်နဲ့ animations တွေကိုစိတ်ကြိုက်နိုငျပါသညျ!
Oppo f3 ပေါင်းသည် launcher - သင့်မှာ Android စမတ်ဖုန်းများအတွက်အလွန်အေးမြသော QHD resolution ကိုအဆင်သင့်ဖွင့်တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာ၏တန်ခိုးနှင့်မှတ်ဉာဏ်ထိရောက်မှုသည်အခြား launcher လျှောက်လွှာထက်ပိုအေးစေသည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုအဘယ်သူမျှမဘတ်ထရီစားသုံးနှင့်မိုဘိုင်းပျင်းရိအချိန်တိုးမြှင့်။
launcher Oppo F1s Selfie Theme သင်သည်သင်၏ Android ထုတ်ကုန် / ဖုန်းပေါ်တွင်အသစ်နှင့်ကောင်းတဲ့ User Interface ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ launcher Oppo F1s Selfie Theme သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းတစ် launcher Oppo F1s Selfie အဓိကအကြောင်းအရာတူပါလိမ့်မည်။
launcher Oppo F1s Selfie Theme နောက်ခံပုံအများကြီးပါရှိသည်နှင့်အသင့်အမှတ်တရများသို့မဟုတ်ဘက်ထရီပြေးထွက်စိုးရိမ်ရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
Oppo တင်ပေးသူ - Oppo အဓိကအကြောင်းအရာ မီးမောင်းထိုးပြအင်္ဂါရပ်များ:
◆ launcher စတိုင် Oppo f3 ပေါင်း:
- personalization: Oppo ဖွင့်တင်, သငျသညျလှယျကူသောပြောင်းလဲမှုကို desktop ပေါ်ကဇယားကွက်, sroll အမြန်နှုန်း, အဆုံးမဲ့ scrolling မ, ပြပွဲသို့မဟုတ်ဝှက်ရှာဖွေရေးဘား, folder ကို preview ကို customize နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာအများကြီးအတူ။ သငျသညျ setup ကို HD ကို OS10 နောက်ခံပုံများလုပ်နိုင်နှင့်သင်လိုချင်သောအဆင်အပြင်ကိုရွေးပါအသစ်ဝစ်ဂျက်ကို add
- အလိုလိုဒီဇိုင်းကျနော်တို့တိုင်းအင်္ဂါရပ် rethought ပါတယ်။ အားလုံး app များကိုတိုက်ရိုက်သင့်အိမ် screen ပေါ်မှာပြသ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအထဲမှာဘာပြသသောဖိုင်တွဲများအနေဖြင့်။
- တင့်တယ်ခြင်းနှင့် Cool: Oppo Theme ကိုသင်ဖို့လှပသော UIs, Oppo f1s, f3 ပေါင်း, ဖျော်ရည်အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အေးမြသက်ရောက်မှုများအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာတတ်၏။
- စိတ်ကြိုက် tile ကို: အတူ Oppo တင်ပေးသူ သငျသညျအုပ်ကြွပ်, အရောင်အဆင်းနဲ့ icon များ၏လုပ်နိုင်လွယ်ကူသောပြောင်းလဲမှုအရွယ်အစား, များစွာသော apps တွေအတွက် Oppo Theme ထုံးစံအိုင်ကွန် pack ကို
- ချောမွေ့အိုင်ကွန် animations တွေကို
- QHD နှင့် WQHD နောက်ခံပုံများ
- အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်: Oppo များအတွက် launcher လွယ်ကူသော app များကိုမဖျက်ပစ်နဲ့ပတ်ပတ်လည် apps များရွေ့လျားနိုင်ပါတယ် f3 အဓိကအကြောင်းအရာပေါ်နဲ့တူတာကိုပိုလွယ်သည်။
- အဘယ်သူမျှမက App Drawer: အားလုံး Apps ကပ Desktop ပေါ်မှာကဆက်ပြောသည်ပါလိမ့်မည်, သင် app ကိုအံဆွဲမပါဘဲတိုက်ရိုက်သူတို့ကိုစတင်နိုင်ပါသည်။
Oppo Launcher ၏ထိုအခါအများကြီးပို feature ကို - Oppo f1s များအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခု Oppo ဖုန်းကို f3 ကဲ့သို့ဖွစျဖို့သငျသညျကိုဖုန်းစေ😀
launcher Oppo ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို 100% အခမဲ့သုံးစွဲဖို့အတှေ့အကွုံဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, သင်လွယ်ကူသည်
ဒေါင်းလုပ် Oppo တင်ပေးသူ - Oppo များအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ ယခုနှင့်ပျော်စရာ join! ပိုများသောစိတ်ဝင်စားဖို့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမကြာမီလာမည်လိမ့်မည်!
Oppo တင်ပေးသူ - Oppo F3 Plus အားများအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ
5.94 ကို MB
mega ဖွင့်တင်: ...